Kukholelwa ukuba ukuhamba yinto enye oyithengayo ukuze ube sisityebi okanye uzive usisityebi! Kwaye akusoloko kuyimfuneko ukuba kufuneka wahlukane nemali yakho oyisebenzeleyo nzima ukuze wonwabe. Ngelixa ucwangcisa ukuphuma kweziqithi zitshisayo zelanga, okanye ikhephu eligutyungelwe likhephu, kungenjalo intlango eluhlaza eluhlaza, Wenza izigqibo ezininzi ngokuqhubekayo. Yenza iphupha lakho lifezeke ngokungenzi okufanayo kube nzima kakhulu. Hlala neqela lakho kunye nesicwangciso ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali. Yenza lonke uhambo lube lolunobuhle. Ukuhambahamba kweqela yeyona ndlela ilungileyo yokuba kunye nokutshata okuhle. Kodwa ayizizo zonke iinqanawa ngokufanelekileyo, ukuba ayicwangciswanga ngemfezeko. Kungavakala kungenangqondo ukugcina umkhondo weendleko zohambo, kodwa kukho izinto ezininzi ezifihlakeleyo phakathi kwayo. Khusela zonke iimpawu ezimbi ezinxulumene nokuhamba kweqela kwaye ucwangcise ngokufanelekileyo. Funda apha ngezantsi iingcebiso ezintandathu ezingashukumiyo ezinesono zokucwangcisa uhlahlo-lwabiwo mali lweqela.
Ewe! Ulungile! Kuya kufuneka uthathe isigqibo kwindawo oya kuyo kuqala ukuze wazi malunga nendleko zizonke. Kodwa ngamanye amaxesha imi ngamaqhinga, njengoko zombini zidibene. Kwaye yinto enzima kakhulu eyathandanayo. Nangona ucwangcisa uhambo lwakho olulandelayo kunye neqela labahlobo, ayingabo bonke abanokulingana ngokulinganayo. Ngaloo ndlela, dibana nohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, wagqiba ngazwi linye. Lonke ucwangciso luya kuthamba, njengoko uninzi kwiqela alizukuziva luxinzelelo ekusebenziseni inani elikhulu. kwakhona, ukwenza izigqibo malunga nokukhetha indawo ojika kuyo kulula, ngakumbi nohlahlo-lwabiwo mali oluzinzileyo. Ngokuhambelana, wena, kunye namanye amalungu eqela, Ungatsalela umnxeba kwiindleko ezongeziweyo njengeenqwelomoya, irente, ukudla, ukuphuma, kwakunye nokunye okuninzi. Ukusebenzisana ngokupheleleyo yinto efunekayo leyo, ngelixa ucwangcisa uhambo lweqela, ukugcina ubunye.
Zama ukufumana indlela yokuzahlula iindleko. Yenza isigqibo ngeendlela kunye neendlela zokwahlula iindleko zizonke phakathi kwamanye amaqela eqela. Njengokuba, uyakuba noxanduva lwakho lonke ukubhukisha igumbi lonke, okanye kufanelekile ukuba wabelane ngokulinganayo? okanye, Unomdla ekuthatheni uxanduva lwakho njengokuqesha i-cab kunye nokuphuma kwemini yonke imihla? Kukhenketho oluninzi lweqela, Ukuthatha indawo ethile yomsebenzi kuyancomeka ngokubanzi. Iyanciphisa ingxaki kwaye iphume nayo yonke inkcitho enxulumene nokuhamba.
Ukuba ucwangcise uhambo oluya kuhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kungekudala, zama ukuseta iakhawunti nganye. Kuya kufuneka wenze okufanayo ngaphambi kwexesha. Bonke ababandakanyekayo kuhambo lweqela banokufaka imali ethile, ngenyanga, Ukugcina ii-hass zemizuzu yokugqibela. Kusisenzo sobulumko ukufumana iihotele ezilungileyo, Iinqwelomoya, kunye nokutya okugqibeleleyo.
Ngeli xesha kwisicwangciso sokuhamba sohambo lweqela, yibandakanyeke kancinci ngemali yakho. Gxila kubakhweli bezentengiso. Zininzi iindiza ezisebenzisa iindleko, kusingathwa ngesandla iiphakheji zokuhamba. Cwangcisa inyathelo lakho emva kokuxoxa ngezinto ezifihlakeleyo kunye namaqabane akho eqela. Njengokuba, Unako ukuchitha isicwangciso sakho sokuhamba esiya eRoma, Athens, kunye neIstanbul ngeMalta. Kwenye indawo, ukuqala uhambo lwakho lweqela ukusuka IBerlin iya ePrague, I-Budapest kunye neRiga zime ukhetho olukhulu! Kwaye uthini malunga nokuhamba-hamba okanye ukubona inkampu yeveki yonke endle kunye neqela lakho lomtshato? Ngamaxesha amaninzi, Imozulu isebenza njengezithintelo. Ngaphandle kwemvula enkulu, ukuvutha kwelanga okanye umoya ovuthuzayo, ukuhamba ngemoto encediswa ngu uphahla lophahla, yintsikelelo! Ikhathaza ukugubungela ngokupheleleyo kunye nokufakelwa kwempahla efakwe ngaphakathi ngelixa sisenza sonke ulwazi zokuhamba opholileyo.
Uhambo lweqela luhlala luphumelela xa kungekho kungqubana okanye ingxabano enxulumene nokutya, ngakumbi. Ewe! Uninzi lweqela luhamba 'ngokudelela' umbuzo xa kuvela umbuzo ngokukhetha ukutya kwilungu ngalinye. Kwiimeko ezinjalo, Ukucinga okuqinisekileyo kunye nokutya okunempilo kufanele kube sisixhobo sakho. Ukusasaza kwindawo yokutyela kuqinisekisa iingxaki kunye nokudideka phakathi kwamaqela eqela. Njengokuba, kwiqela leshumi, umntu omnye uhlawula lonke ityala le ibhotile ye wayini, kwaye kamva abanye abantu kwiqela bahlawula kwisithuba, ukudideka okubalulekileyo kuya kwenzeka. ke, kholelwa kukwahlula isheke rhoqo. Kwenye indawo, ungayenza ngoku 'ngababini-ngababini.' Lungisa icandelo lakho nomnye umntu kwiqela kwaye uqhubeke ukuhlawula ityala.
Uyila iqela kwezi zicelo, apho amalungu eqela angangena khona ngokukhawuleza kwaye akwazi ukwahlula iindleko zonke kwiipesenti. Izilumkiso zithumela izikhumbuzo ezinobuhlobo kubantu abahlukeneyo abachaphazelekayo ekucimeni umthetho oyilwayo. Ngelixa ucwangcisa ukwenza umgca kwiindleko zehambo yeqela, kuthintele ukugcina umda okanye ukuhlawula iintlawulo ngomlomo. Khumbula oku ukuba ube noxolo hambela phambili.
Nje ukuba ukonwabele uhambo lwakho lweqela kunye nomhlaba ngovuyo ekhaya, lixesha lokuhlawula amatyala akho amadala (ukuba kukhona enye)! Kungcono ukuhlawula amatyala amadala, Ngexesha elibekiweyo uvumile. kungenjalo, imile njengempahla! Uninzi lukhetha ukuhlawula ngeposi ukusetyenziswa ezahlukeneyo online, njengoko kuvakala ngathi yirvy. Kwaye abanye abantu abasindayo ngengqondo bathanda ukuhlawula ngokwabo, ngemali. Qinisekisa ukuba uhlawula kwiveki okanye engaphaya. Kwenye indawo, uza kuphulukana nesimemo sohambo lweqela elilandelayo.
Ayikho, kodwa inkolelo ephosakeleyo phakathi kwabaninzi abajikelezayo kwihlabathi ayinakuze yenzeke ngaphandle kwekhadi letyala elingapheliyo okanye ukuphuma kwemali. Okanye ukuba uthile uxhasa lonke uhambo! Kodwa kungcono ukungakholelwa kwinto enye. Ndiqinisekile ukuba akukho hambo lwenzeka ngaphandle kwenkcitho. Izikhokelo ezikhankanywe apha ngasentla ngokuqinisekileyo ziya kukugcina kunye neqela lakho lokuhamba-nihlangane kunye kwiihambo ezininzi ezizayo. Zicace gca izigqibo zakho, kwaye usebenzisane nabanye ohamba nabo, ke uhambo lweqela alusayi kuba ngaphaya kwephupha!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “6 Iingcebiso zeSavvy zokuCwangcisa uhambo lweQela kuHlahlo-lwabiwo mali” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/group-trip-on-budget/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
zokuhamba Train France, zokuhamba Train Germany, Train Travel The Netherlands, tips zokuhamba train, Travel Europe